प्रदेश-३ – Page 221 – Halkaro
कृषि क्षेत्रमा कृषि आधुनिकरण गर्ने रेणु दाहालको प्रतिवद्धता
चितवन । भरतपुर महानगरपालिकाको मेयरका उम्मेदवार रेणु दाहाललाई नेपाली काङ्ग्रेसले पनि सहयोग गरे सगँै आम सर्वसाधरणमा थप उत्साहित देखिएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्र र काङ्ग्रेसले मेयर र उपमेयरमा साझा उम्मेदवार घोषणा गरेर चिनाबी प्रचार प्रसारलाई पनि एकल तथा संयुक्त रुपमा तिब्र बनाएका छन् । आज भरतपुरका विभिन्न वडाको चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्दै साझा उमेदवार […]
क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. आचार्य
चितवन । विपी कोईराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालको कार्यकारी निर्देशकमा डा. विजयचन्द्र आचार्य नियुक्त हुनुभएको छ । अस्पतालको संचालक समितिको आईतवार बसेको बैठकले डा. आचार्यलाई कार्यकारी निर्देकमा नियुक्ति गरेको हो । अस्पतालको नियमावली अनुसार खुला प्रतिष्पर्धाबाट ढा. आचार्य नियुक्त भएका हुन । १३ जना चिकित्सकले कार्यकारी निर्देशक हुनका लागि आवेदन दिएका थिए । अन्र्तवार्ता र कार्ययोजनाको […]
बुद्ध जयञ्ति मनाउन समिति
चितवन । बौद्ध धर्म सेवा समिति चितवनले विगतका वर्षहरूमा जस्तै यस वर्ष पनि विधिवत रूपमा बुद्ध जयन्ती पर्व मनाउने भएको छ । समितिले यस वर्ष मनाउन लागेको २५६१औँ बुद्ध जयन्तीको सम्पूर्ण तयारी सकिएको सोमबार महाबौद्ध गुम्बा भरतपुरमा पत्रकार सम्मेलन गरेर जानकारी गराएको हो । बैशाख २७ गते परेको बुद्ध जयन्तीमा भव्य कार्यक्रम आयोजना गर्ने समिलिते […]